Faa'iidooyinka sinjibiil: Mid ka mid ah Daawooyinka Dabiiciga ah ee ugu Da 'weyn | Ragga Stylish
Faa’iidooyinka sinjibiil waxaa laga dareemaa meelo badan oo jirka ka mid ah. Maaha wax fursad ah in xididkan, oo sidoo kale dhadhan siiya cuntadaada, uu yahay mid ka mid ah daaweynta dabiiciga ee ugu da'da weyn adduunka.
Taariikh taariikhi ah, sinjibiil waa cunno aad loogu taliyo cuntadaada. Kuwa soo socdaa waa faa'iidooyinka cajiibka ah ee aad heli karto haddii aad ku darto cuntadaada, faa iidooyinka laga dareemi karo banaanka iyo gudahaba.
1 La dagaallanka infekshinka
1.1 Isbahaysiga dhoola cadeyntaada
2 Waxay hagaajinaysaa dheefshiidka
2.1 Waxa loo qaato hargab
3 Waxay yareysaa xanuunka murqaha
3.1 Iyo madaxa
4 Yaree kolestaroolka
5 Waxay ka hortagtaa cudurrada
5.1 La dagaallanka kansarka?
5.2 Cuntooyinka ka hortagga kansarka
La dagaallanka infekshinka
Had iyo jeer waa mid xiiso leh in lagu daro cuntooyinka lidka ku ah bakteeriyada cuntada, sinjibiilkuna wuxuu ka mid yahay kuwa ugu caansan. Sida lagu sheegay cilmi baaris, cunista sinjibiil cusub waxay kaa caawin kartaa inaad la dagaasho cudurka. Sida muuqata, waxay ka kooban yihiin dhowr kiimiko oo isku dhafan oo jeermiska ka celiya.
Isbahaysiga dhoola cadeyntaada
Soojiidashada labka ah ayaa ugu horreyn ku saleysan timaha iyo dhoolla caddeynta. Sii dareenka ay uqalmayaan waxaadna helaysaa muuqaal xoogan. Sinjibiil kuma caawin karo inaad timahaaga dib u soo ceshato, laakiin waxay kaa caawin kartaa inaad ilkahaaga ku hayso qaab wanaagsan. Bakteeriyadu wey dagi kartaa afka waxayna sababi kartaa infekshinka ciridka, laakiin sinjibiil, mahadnaqa ay leedahay sifooyinka bakteeriyada, ayaa la dagaallama wuxuu ilaaliyaa mid ka mid ah hubka ugu wanaagsan ee aadanaha: dhoola cadeynta.
Waxay hagaajinaysaa dheefshiidka
Sanjabiilku wuxuu xulafo la yahay nidaamka dheef-shiidka, markaa waad u adeegsan kartaa-gaar ahaan haddii aad doorbideysid daaweynta dabiiciga ah ee daawooyinka-- Markaad dhibaato nooc kasta ah qabtid, sida dheef-shiid, gaas, ama lallabbo.
Dheef-shiidka iyo gaaska ayaa kugu dhufan kara daqiiqadda ugu habboon, inta badan ka dib mid ka mid ah cuntooyinka culus ee aadan diidi karin. Laakiin dad badan ayaa si fudud ugu xanuunsada dyspepsia - dheef-shiid kiimikaad joogto ah. Marka lagu daro kaa caawinta inaad sii deyso gaasaska ku ururay mindhicirada, sinjibiil sidoo kale wuxuu inta badan bixiyaa natiijooyin wanaagsan markay tahay Ka caawi cunnada sidii ay ku socon laheyd oo ha ku dhegin calooshaada si ay dhibaato kuu siiso.
Waa in la ogaadaa inay sidoo kale yareyneyso lallabbada, sidaa darteed waa ikhtiyaar mudan in laga fiirsado marka aadan si fiican u dareemeynin nooc jirro ah awgood.
Waxa loo qaato hargab
Fiiri maqaalka: Daaweynta qabow. Halkaas waxaad ka heli doontaa talooyin waxtar leh si loo yareeyo astaamaha hargabka oo aad uga dhigto nidaamkan aan fiicnayn wax badan oo loo dulqaadan karo.
Waxay yareysaa xanuunka murqaha
Ma ogtahay in cuntada waqtigan ina khuseysaa ay sidoo kale kaa caawin karto yareynta xanuunka murqaha? Faa'iidooyinkeeda anti-bararka waxay leedahay fursado badan. Mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ayaa ah midka la xiriira tababarka: marka aad xanuun dareento murqaha (wax aad u badan, gaar ahaan howlaha ugu baahida badan) inta u dhexeysa hal tababar iyo kan xigta, tixgeli qaadashada sinjibiil yar si xanuunka uusan kaaga hor istaagin ugu badnaan.
Qof walba wuu ku dhacaa madax xanuun mar uun, iyo daqiiqadahaas oo aad haysatid sinjibiil yar waxba kuma yeeli doono. Dhab ahaan, cuntadani waxay yareyn kartaa madax-xanaaqaas iyo kuwa aan la aqbali karin ee kaa horjoogsanaya inaad horumariso habkaaga caadiga ah.
Kalastarol waa halistaas oo inta badan sugta dhammaadka cuntada aan caafimaadka qabin. Laakiin, nasiib wanaag, waxaa jira wax laga qaban karo si looga fogaado xaaladdaas: ku dar cuntadaada cuntooyinka hoos u dhiga kolestaroolka. Haa, sida lagu sheegay cilmi baaris, sinjibiil ayaa ka mid ah cuntooyinkaas, wax siinta natiijooyin wanaagsan markay tahay hoos u dhigida LDL kolestaroolka ama kolestaroolka xun. Waa in la ogaadaa inay lagama maarmaan tahay in loo qaato si joogto ah si loo ogaado faa'iidooyinkeeda.
Waxay ka hortagtaa cudurrada
Faa'iidooyinka sinjibiilku kaa dhigi maayo mid aan dhimanayn ama kaa badbaadin doonin inaad bukooto, nasiib darro, laakiin waxay u diyaariyaan jirkaaga inuu si wanaagsan ula dagaallamo cudurrada daba-dheeraada, oo markii horeba aad u badnaa. Sidaa awgeed, ku darista sinjibiisha qorshahaaga cunista waxay yareynaysaa fursadahaaga dhiig kar ama wadne xanuun. Sirtu waxay ku jirtaa hodantinimadeeda antioxidants, oo ka qayb qaadata shaqooyinka muhiimka ah ee jidhka, oo ay ku jiraan ilaalinta DNA-da. Caadi ahaan, si aad uga faa iideysato waxaad u baahan tahay inaad ku darto cunto caafimaad leh oo jimicsi joogto ah.
La dagaallanka kansarka?
Noocyada kansarka qaarkood, oo ay ku jiraan kansarka qanjirka 'prostate', ayaa dib u dhigi kara koritaankooda sinjibiil awgeed. Si kastaba ha noqotee, tani waa mowduuc aad u culus, sidaa darteed in kasta oo ay xiiso leedahay in laga ogaado cuntooyinka leh faa'iidooyinka ka hortagga kansarka, waxaa lagama maarmaan ah in si taxaddar leh loo qaato oo aan la joojin ku-tiirsanaanta daaweynta caafimaad.
Daraasado waaweyn ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo fahmo xiriirka ay la leedahay Alzheimers (cudur sanjabiilku la dagaallami karo)iyo sidoo kale heerarka sonkorta dhiiga iyo sida jidhku u isticmaalo insulin, taas oo laga yaabo inay ku fiicnaato isticmaalka sinjibiisha.
Fiiri maqaalka: Cuntooyinka ka hortagga kansarka. Halkaas waxaad ka heli doontaa waxa la cuno si loo kordhiyo awoodda ka-hortagga kansarka ee cuntadaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Waxtarka sinjibiisha